Call of Duty: Warzone ကို အခမဲ့ကစားနိုင်ပြီ
Action-shooter အမျိုးစားထဲမှာ ရေပန်းအစားဆုံး Title တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Call of Duty ကတော့ Free-to-play ဆိုပြီး လုပ်ချသွားပါပြီ။ အခုလို အခမဲ့ကစားခွင့် ပေးလိုက်တာလည်း အကြောင်းရှိပါတယ်။
Battle Royale ဂိမ်းတွေ တခေတ်ထလာတဲ့ ၂၀၁၇ နောက်ပိုင်း Fortnite (Epic Games) ၊ Apex Legends (Respawn Entertainment) နဲ့ Battlefield 5: Firestorm (Electronic Arts) တို့ ထွက်လာသလို ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာမှာ Launch လုပ်သွားတဲ့ Destiny2(Bungie) ဝက်ဝက်ကွဲ အောင်မြင်ခဲ့တာနဲ့ ခန်းမှန်းနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Slow-paced ကစားဟန် နှစ်သက်သူတွေအတွက် အထူးဆန်း ဖြစ်မယ်တော့မထင်။ Black Ops4မှာတုန်းက Blackout (Battle Royale Mode) မိတ်ဆက်ဖူးသလို Modern Warfare အတွက် ကြေညာလိုက်တဲ့ Warzone တို့ ကွာခြားမယ်မထင် (Trailer Show ကြည့်လိုက်)
ဒါပေမယ့် ဘာထူးခြားချက်တွေ ရှိနေမလဲ? Free-to-play ဖြစ်တဲ့အတွက် Download ဆွဲကစားနိုင်မယ့် Guide ကိုပါ ဖော်ပြသွားပါမယ်
အထူးသတိပြုရမယ့် အချက်က Activision ထောက်ပံ့ထားတဲ့ (Localised Region) ဒေသအတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံမပါဝင်ပါဘူး။ အဲ့တော့ VPN ခံပြီး အနီးစပ်ဆုံး Server မှာ ကစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Latency Issue ရှိပါမယ်။
Warzone Time (Blizzard.net)
Battle Royale ကစားဖို့အတွက် Modern Warfare မူရင်းဂိမ်း (ဒေါ်လာ ၆၀) ဝယ်စရာမလိုပါဘူး
PUBG နဲ့ Apex Legends ၊ Fortnite တို့နဲ့ တည့်ဆော်ဖို့ ထွက်လာတဲ့ဂိမ်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဂိမ်း ၁ ဂိမ်းမှာ လူအများဆုံး အယောက် ၁၅၀ ကစားနိုင်ပါတယ်။ (Compare 100 on PUBG & Fortnite ၊ 60 on Apex) Chief Executive ဖြစ်သူ Will Hershey ဘယ်လို ပြောထားလဲဆိုရင်
PUBG နဲ့ Apex Player တွေ CoD သမားတွေ ကြည့်လိုက် သူတို့ကစားဟန်တွေက အိုနေပြီ ၊ Fornite ဆိုတာ ကလေးအကြိုက်။ အပြောင်းလဲ ဖြစ်သွားအောင် ၃ ယောက်တစ်ဖွဲ့ပုံစံနဲ့ Verdansk မှာ စစ်ခင်းကြတာပေါ့ လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
Vehicles in Warzone (TheVerge)
ပုံစံက Battlefield V လို မူရင်းဂိမ်းကနေ Firestorm Battle Royale Mode ခွဲထွက်လာသလိုဖြစ်ပေမယ့် PUBG ၊ Fortnite တွေလို Stand Alone ဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားတယ် ဆိုပါတယ်။
Verdansk ဆိုတာ Modern Warfare ကစားဖူးသူတွေအတွက် မစိမ်းတော့။ Battle Royale ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ PUBG နဲ့ Fortnite တို့ထက် မြေပုံပိုကျယ်တယ်၊ Player တွေအနေနဲ့ PlayStation ၊ Xbox နဲ့ PC နှစ်သက်ရာ Console တွေမှာ Cross-play Support နဲ့ Progress ကို Save ထားနိုင်မယ် (Like Destiny 2)
Apex လို Player တွေရဲ့ Ping Items ဖော်ပြမယ့် Coolest Feature ပါဝင်တဲ့အတွက် Microphone မသုံးတဲ့ ကောင်တွေနဲ့ ကစားလည်း Item တွေကို ထောက်ပြနိုင်မယ်။
အခမဲ့ဆိုပေမယ့် In-game Purchase ပါဝင်ဦးမှာဖြစ်ပြီး Modern Warfare ပိုင်ရှင်တွေ ဝယ်ထားပြီးသား Skins ၊ Customized Avatars တွေနဲ့ Equipment တွေကို သုံးနိုင်မယ်။
In-game Footage (Charlie INTEL)
Newbie တွေအနေနဲ့ In-game Cash အသုံးပြုပြီး Upgrades ၊ Gears တွေနဲ့ သေသွားတဲ့ Teammates ကယ်တင်ဖို့ Tokens တွေပါ ဝယ်ယူနိုင်ပါမယ်။
Call of Duty Mature Contents
တကယ်တော့ CoD: Warzone ကို နောက်တမျိုးဖွင့်ဆိုရင် လူတိုင်းအတွက် မဆိုလိုပါဘူး။ In-game Purchase နဲ့ Characters တွေအပြင် Tools တွေကိုပါ Upgrade ၊ Unlock လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် ငွေနဲ့ Level တက်မြန်မယ်။
Battle Points (Blizzard)
သိတဲ့အတိုင်း Modern Warfare Reboot ဟာ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက် Interactive မဟုတ်ရင်တောင် Iconic Character ပါတဲ့အတွက် CoD Fans တွေကို သွေးဆွသလို ဖြစ်နေတယ်။ Action-shooter နှစ်သက်သူတွေအနေနဲ့လည်း နှစ်သက်ကျတယ်။
အဲ့တော့ ကစားကျမလား? PC နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ Blizzard.net App ကနေ Call of Duty: Warzone ကို Download ချပါ။ PlayStation နဲ့ Xbox မှာဆိုရင် Store ကနေတဆင့်ဆွဲပါ။
Cinematic Trailer (App Trigger)
Newbie တွေအတွက် ကစားရလွယ်ကူအောင် Gunfight Mode ကို ထည့်ပေးထားပြီး Bots တွေနဲ့ အပျင်းပြေ ဂိမ်းသဘောတရား နားလည်အောင် ကစားနိုင်ပါတယ်။ Download ဆွဲရမယ့် Size က 100GB အထိ ရှိနိုင်ပါတယ် (Be patient)
Download Battlenet App Here
Modern Warfare ပိုင်ရှင်တွေကတော့ ဆွဲပြီးသား 175GB ကိုမှ နောက်ထပ် 22GB ထပ်ဆွဲရပါမယ် (မမိုက်ဘူး) Latest Patch သွင်းမထားသူတွေဆိုရင်တော့ 80GB လောက်ထိ Down ရနိုင်ပါတယ်။
1 Vs 1 (TheVerge)
Launch Sequence က မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့မှ စတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ၁၁ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီ ဒါမှမဟုတ် ၁၂ ရက်နေ့မှ Download ဆွဲ ကစားနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ ပြဿနာက VPN ခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဆွဲပြီးသွားရင်တောင် Lag Issue မရှိဘဲကစားနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ရမှာပါ။
Source: TheVerge ၊ BBC ၊ Polygon